LeBron James iyo Cleveland Cavalier 137-116 Warriors Baajiyeyna in la Xaaqo LAAKIIN … – Radio Daljir
Juunyo 10, 2017 4:08 b 0
Xalay waxaa la cayaaray cayaartii afraad ee horyaalka NBA-da, Cleveland Cavaliers oo qarka u saarnaa in la xaaqana xaaqin waa ka badbaadeen, waxayna la soo bexeen laacibnimo sare, weerar wada warmaysan iyo difaac aan loo gali karin oo wada gaashaaman. Team Clevelnd Cavaliers guushu waxy ku raacaday 137-116 kagana badsheen Golden State Warriors.
Golden State Warriors waxay hadda Cavaliers ku huggaaminayaan 3-1, waana 7 ciyarood tirada ugu roon.
Cayaarta shanaad waa habeenka Isniinta 12ka Juun iyo guriga Golden State iyo Cavaliers oo loo boqo, lAAKIIN …!
Ammaanka Muqdisho iyo Awaamiirta Taliye Sanbalooshe (dhegayso)